Franmụaka Franchises maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franmụaka Franchises
Childrenmụaka Amalitere Franchises
Mụaka kacha ọhụrụ Franchises
Nchịkọta ụlọ ọrụ ehibere na 2002, Monkey Puzzle Day Nurseries bụ ụlọ ọrụ nlekọta kacha ọhụrụ na UK na onye na-elekọta ụmụaka atọ. Tọrọ ntọala ...
Chọọ ihe kachasị ọhụrụ na nke kacha atọ ụtọ ụmụ franchise ohere taa na-eji Franchiseek International.
Want chọrọ ka gị na ụmụaka rụ ọrụ? Ọ dị mma ma ọ bụrụ na nke a bụ akụkọ ọma gị, passion na-achọ ịzụ ahịa metụtara ụmụaka na-etolite n'ọtụtụ akụkụ, ebe ndị nne na nna na-achọkarị maka ọdịmma ụmụaka ha. Ma olee ụdị ohere enwere ike ị nweta n'ime ngalaba metụtara nwatakịrị?
Franmụaka Franchise Ohere
Enwere ọtụtụ ohere aha franchise maka ire ere nke gụnyere iso ụmụaka na-arụ ọrụ. Ndị a gụnyere:
Nkuzi akwụkwọ - choro maka ulo akwukwo kachasi nma na ntozu oke n’uche nne na nna obula. Nke a bụ ya mere ọtụtụ ndị nne na nna ji etinye ego na ụlọ maka ụmụ ha. Nkuzi franchises dị ukwuu na-eto eto chọrọ, ụwa niile.
Ilekọta ụmụaka anya - ọtụtụ ndị nne na nna chere na ọ dị mkpa ka ha gaa ọrụ iji kpata ego ha nwere ike ị nweta, nke mere na ọtụtụ ndị nne na nna na-atụgharịkwa na ọrụ nlekọta ụmụaka. E nwere ohere dị iche iche ịchekwa nlekọta ụmụaka maka ịre ụwa niile. Ebe ihe dị ka 28% ụmụaka na nne ha bi, ihe a chọrọ na-eto n'ike n'ike.
Clubmụaka klaasị Franchises - mmasị na ụlọ akwụkwọ na ezumike / ọkara nke ihe omume na klọb na - eme nke ọma na nnukwu ihe na - eto eto - site n'aka nne na nna na ụmụ. Ọ bụ na nne na nna nwere mmasị ịhapụ ụmụaka n'ụlọ ma karịa igwu egwuregwu vidiyo na ekwentị smart, kama igwu bọọlụ na ihe omume n'èzí nke ọtụtụ franchise dị iche iche na-akwado.
Relatedmụaka metụtara ụmụaka nwekwara ike ịgbasa n'ime mpaghara mkpọsa ahịa ahịa, yana ọtụtụ azụmaahịa ụlọ ọpụrụiche na-eyi uwe ụmụaka, ihe ụmụaka ji egwuri egwu na egwuregwu.
Enwere ọtụtụ ohere ịsụgharị asụsụ ụmụaka dị iche iche dị, ị ga - achọrọ ihe maka gị.
Yingzụta Franmụaka Franchise
Otu n'ime uru ụmụaka na-akpọ franchise metụtara bụ na ị na-azụ ahịa onwe gị, mana ọbụghị n'onwe gị.
Mgbe ị tinye ego na ntinye aka nke ụmụaka, ọ bụrụ n'obere ọrụ ọrụ oge ọkara ma ọ bụ aha nlekọta ụmụaka dịka Manna-Seh na-elekọta ụmụaka, franchisor ga-enye gị ihe niile ịchọrọ ka ị wee mee. A na-etinyekarị ihe ndị a na ntinye aka na aha franchise ma na-agụnye ihe azụmaahịa, uwe ndị ọrụ, weebụsaịtị wepụtara na ntanetị ma na-enyekarị aka n'ịhọrọ mpaghara ziri ezi. Mwepụta ọrụ na akụrụngwa enyere dị iche site na aha rue ahaaka yabụ hụ na ị ga-elele nke a edepụtara na akwụkwọ aha tupu ịzụrụ.
Chọgharịa site na ọtụtụ ohere ụmụaka metụtara aha dị n'akwụkwọ ndekọ aha franchiseek dị n'okpuru.